Tena voa mafy foana ity Firenenay ity, anisan’ny mahantra indrindra ;
Faha dimy eran-tany hono, raha jerena ny tarehi-marika misy azy izay.
Miezaka ihany miarina, mivoatra sy mandroso ary manova famindra ;
Fa toa tavela foana eo amim-piaingana, izay no zava-misy hatramin’izay.
Anisan’ny mahatonga izany, isaky ny fahavaratra fisian'ny tafio-drivotra ;
Mitsoka tena mafy, mandravarava sy mamotipotika ny tanindrazanay.
Mampitondra takaitra ny olon-drehetra, satria tsy misy afa-mihodivitra.
Aza sendra azy ihany, fa ataony tena mamay toy ny avy nihinana sakay.
Izay rehetra jerena rehefa avy nandalo sy nanavatsava ny tafio-drivotra ;
Dia tontolo tena mahonena, potipotika sy torotoro, ary tena mila trano lay.
Feno tomany sy toreo, satria izay rehetra niariana dia tena lasa rivotra ;
Fahantrana miabo, miha-lalim-paka andro aman’alina no tena dikan’izay.
Fa maninona loatra ary no mbola miverimberina ianareo ry tafio-drivotra ?
Sy mandalondalo foana, mihaodiaody, manao ramatahora ny firenenay.
Mbola misisika ihany manao amboletra, izahay anefa efa voky rivotra ;
Tsy mba fantatrao ve, efa ampy izay ankaso marobe efa vitanareo izay !
Ny fanirianay ry Tompo dia tsy hiverina eto intsony ny tafio-drivotra.
Fangatahana ihany anefa, fa ianao ihany no mahalala ny mahasoa anay.
Miverina ihany anefa, ary toa tsy manam-pitsaharana ny tafio-drivotra ;
Fampahatsiahivanao mba tsy ho variana, satria efa akaiky ny farany izay.
Sokajy : Fahantrana, Fampaherezana, fiainana, Fiaraha-monina, Tanindrazana, Vavaka